विदेशमा श्रीमान हुनेका श्रीमतिहरुले एक पटक अवस्य पढ्नु होला – Sanjal Nepal
Homeसमाचारविदेशमा श्रीमान हुनेका श्रीमतिहरुले एक पटक अवस्य पढ्नु होला
November 12, 2020 admin समाचार 4642
मेरो श्रीमान् माल्दिभ्समा हुनुहुन्छ । उहाँलाई वि;दाइ गर्दा मैले घर व्यवहार म मिलाउँछु चिन्ता नर्गनु भनेको थिएँ । सम्बन्ध भनेको विश्वास त हो नि उहाँलाई मैले घर सम्हाल्छु भनेर विश्वास दिलाएर पठाएँ पछि त मैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नै पर्‍यो ।घर व्यवहार राम्रोसँग चलाउने तरिका नजान्दासम्म सजिलो चाहिँ हुदो रहेनछ पूरा पढ्नुस **
श्रीमानले विदेशमा कमाएको त जोगाउन पर्छ भन्ने भएपनि जोगाउने तरिका नजान्दा भने जस्तो भएको थिएन ।चार महिना अघि गाउँमा विदेशमा हुनेका परिवारलाई वि;त्तीय साक्षरताका कक्षा सञ्चालन हुने भयो । कक्षामा आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापनका साथै विभिन्न व्यवहारिक ज्ञान सिकाइन्छ भन्ने कुरा सुनें ।त्यसपछि म पनि यो कक्षामा बसें । यो कक्षामा बसेपछि मैले आम्दानी के हो र खर्च के हो भन्ने कुरा बुझें ।आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन गरेर कसरी बचत गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकें ।मसँग आम्दानीको स्रोत त केही थिएन । त्यपछि मैले आम्दानीको बाटो खोजें । माइतीमा आमा बुवाले टिका लगाएर दक्षिणा दिएको पैसा पनि जोगाउन थालें । श्रीमानले खर्च गर भनेर पठाएको पैसा पनि धेरथोर बचाउन थालें ।त्यसरी बचाएको पैसाले एउटा बाख्रा किनेको छु ।
अब विस्तारै बाख्रा थप्दै जाने मन छ । खेतबारीमा तरकारी खेती पनि बढाउन थालेका छौं । परिवारका सबै सदस्य मिलेर तरकारी खेती गर्छौं । सिजनको बेला त राम्रै आम्दानी पनि हुन्छ ।तरकारी खेतीले घरख;र्च पुर्‍याउन पाए विदेशमा कमाएको बच्थ्यो भन्ने लाग्छ । वित्तीय साक्षरताको कक्षामा बसेपछि त मैले श्रीमानसँग फोनमा बोल्दा हुने खर्च पनि घटाएको छु ।पहिले महिनाको ७ सय ख;र्च गर्दो रहेछु ।
अहिले यसलाई घटाएर तीन सयमा झारेको छु । यसको मतलब नबोल्ने भन्ने होइन तर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा जान्दा सजिलो हुँदो रहेछ ।कक्षामा बसेपछि त मलाई खर्च घटाएर बचत चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्र लाग्छ । आनावश्यक खर्च गर्ने बानी छाडेर राम्रो ठाउँमा बचत गर्न सिकेको छु । बालबच्चा ठूला हुँदैछन् ।उनीहरुलाई पनि पढाउन बढाउन पर्‍यो । घर बनाउनु पर्‍यो ।हामीले खर्च गर्दा भविष्यलाई सोचेर गर्नुपर्ने रहेछ । कक्षामा बसेर यस्ता कुरा सिकेपछि मैले आफूलाई सुधारेको छु ।
तामाका भाँडामा यी ५ कुरा कहिल्यै नराख्नुहोस् !
December 7, 2020 admin समाचार 1770
धेरै नेपालीको घरमा तामाको भाँडा प्रयोग गर्छन । परापुर्वकाल बाटै तामाको भाँडालाई शुद्ध र धार्मिकतासंग जोडिएर हेरिन्छ ।धेरैलाई तामाको भाँडाको फाइदाबारे थाहा छ । तर कतिपय अवस्थामा तामाको भाँडो हाम्रा लागी हानिकारक पनि हुन सक्छ
November 4, 2020 admin समाचार 6100
काठमाडौँ । पुरुषका बारेमा महिलाई प्रायः सबैकुरा थाहा हुन्छ। मानव सृष्टिको रचनाकार नै महिला भएकाले पुरुषको बारेमा थाहा नहुँने त कुरै भएन। तर महिलाका बारेमा कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन पुरुषले कहिल्यै पनि थाहा पाउन
११ बर्ष देखि आफ्नी आमाको खोजीमा छोरी ,म’र्नु अघि आमाको मुख हेर्न चहान्छु ,मन थामेर हेर्नुहोला ( भिडियो हेर्नुहोस )
February 14, 2021 admin समाचार 1021
काठमाडौ । आमा भन्ने शब्द सुन्दानै यति मिठो सुनिन्छ कि लाग्छ यस्मा सबै समस्याका समाधान छन, त्याग छन, मेहनत छन र सबै दुख भुलाएर सुखमा रमाउन सक्ने खुशीहरु छन । हो आज हामी त्यही आमाको
LEX 18 agenda conversation: Job club (486271)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458379)
Hello world! (384391)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (351905)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (121791)